* Light Of Myanmar *: August 2007
အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ Katrina ကယ်ဆယ်ရေး ၀န်ထမ်းတွေဟာ မိမိရာထူးနဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အသုံးပြုပြီး ဒုက္ခသည် အမျိုးသမီးများအပေါ် မဖွယ်မရာတွေ ပြုလုပ်ခိုင်းကြောင်း သတင်းမှာ ရေးထားပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ အမေရိကန် အစိုးရဟာ Katrina မုန်တိုင်းကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ အမေရိကန်ပြည်သူတွေကို ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ အမှန်တကယ် လုပ်မပေးပါဘူး။ (ဘာကြောင့်လဲဆို အကျယ်တ၀င့် နောက်အပတ်တွင် ရေးပြပါမယ်)။ ဒါကြောင့်လဲ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းက မရှိသလောက်နည်းပါတယ်။ အကျင့်ပျက် ကယ်ဆယ်ရေး ၀န်ထမ်းတွေဟာ အမျိုးသမီးလေးများကို အင်္ကျီလှန်ပြီး သူတို့ရဲ့ ရင်သားတွေကို ပြသခိုင်းကျပါတယ်။ တကယ်လို့ အဲလိုမလုပ်ဘူးဆိုရင် ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများ ပေးချင်း မပြုပဲ ပြစ်သွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီရှေ့ဆောင်နိုင်ငံ အမေရိကနိုင်ငံကြီးမှာ ဖြစ်ပျက်နေတာ လေးပါခင်ဗျာ။
Posted by * In Search of Truth * at 10:18 PM 1 comments Links to this post
၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာ ကျနော်တို့ မြန်မာ့ တပ်မတော်သားတွေ ဂိုထောင်တွေကို ဖေါက်ခဲ့ကျပါတယ်။ ဘယ်လိုကြောင့် ဂိုထောင်ဖေါက်တယ်ဆိုတာ အကြောင်းပြချက် အမျိုးမျိုးကြားနေရပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဂိုထောင်ဖေါက်တာ ကောင်းတဲ့ အလုပ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တိုင်းပြည် သိက္ခာထိခိုက်စေတာတော့ အမှန်ပါပဲခင်ဗျာ။ ထို့အတူပဲ အမေရိကန် ရဲတွေလည်း ဂိုထောင်ဖေါက်ကျပါတယ်။ Katrina မုန်တိုင်းအပီးမှာ လူတွေရဲတွေအားလုံး ဂိုထောင်တွေကို ဖေါက်ကျပါတယ်။ ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါအုံးခင်ဗျာ
အောက်ကဗီဒီယိုကတော့ အဖြူရဲ ဂိုထောင်ဖေါက်တဲ့ ဗီဒီယိုပါခင်ဗျာ။ ရဲ သယ်လာတဲ့ မော်နီတာ အဟောင်းတစ်လုံးဟာ ရဲတစ်ယောက်ရဲ့ တစ်နာရီလုပ်ခပဲရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ နိုင်ငံတခုတည်း ကြည့်ပီး အပြစ်တင်နေတာတွေဟာ လက်တွေ့မကျကြောင်း အခုဗီဒီယိုတွေက သက်သေပြနေပါသည်။
Posted by * In Search of Truth * at 2:01 AM 1 comments Links to this post
တရားရုံးနဲ့ အရင်းရှင်များ ညှိပြီး ဘ၀ပေါင်းများစွာ ဖျက်စီးခဲ့သလား
တကယ်စိတ်မကောင်းစရာ အဖြစ်ဆိုးတွေ အမေရိကန်ပြည်သူတွေ ရင်ဆိုင်နေရတာ မြန်မာပြည်သူလူထု မသိကျပါဘူး။ ဒါလဲ မြန်မာပြည်သူတွေ အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဆိုက်ဝါးလုပ်တဲ့ BBC, DVB သတင်းဌာနကြီးတွေဟာ အမေရိကန်တိုးတက်တယ် ချမ်းသာတယ်လို့ မြင်အောင် သတင်းတွေကို စနစ်တကျ လုပ်ထားချင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ အခုပြောချင်တာကတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းမှာ အကြီးမားဆုံး ပျက်စီးစေခဲ့တဲ့ Katrina မုန်တိုင်း ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ ရင်နစ်ဖွယ်ဇတ်လမ်းလေးပါ။ 9/11 ၊ 7/7 လူသတ်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောစရာတွေ အများကြီး ကျန်နေခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုဒီလောက်ပဲ ရပ်ထားပြီး တခြားပြောချင်တာတွေ ဆက်ပါအုံးမယ်။
Katrina မုန်တိုင်းကြီးကြောင့် လူတွေ သေကျေပျက်စီးတာ မရှိသလောက်ပါ။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ လူပေါင်း နှစ်ထောင်လောက် အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့လဲဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်နေပါတယ် ။ အဖြေကတော့ New Orleans မြို့ရဲ့ ရေတားတမံကြီး ကျိုးပေါက်ရာကနေ ရေများမြိုကို ဖုံးသွားပြီး ရေနစ်သေဆုံးခဲ့ချင်း ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အတူပဲ အိမ်တွေဟာလည်း ရေမြုပ်ပြီး လုံးဝ ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကတော့ New Orleans မြို့တည်နေပုံ မူမမှန်တာလဲ အပြစ်လို့ ဝေဖန်လို့ ရပါတယ်။ New Orleans မြိ့ဟာ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း ချိုင့်ဝှမ်းထဲမှာ မြို့လုပ်ထားတာပါ။ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ထက် နိမ့်ပါတယ်။ မြို့ရဲ့ ဘေးမှာရှိတဲ့ ဧရာမ ရေကန် ကြီးမှ ရေးများမြို့ထဲ မ၀င်လာအောင် ရေတားတမံကြီးများနဲ့ တားဆီးထားရတာဖြစ်ပါတယ်။
မုန်တိုင်းဝင်တော့ ဘေးကန်ကြီးတွေမှာ ရေတွေများပြီး တာတမံကြီး ကျိုးကျသွားတယ်လို့ သတင်းတွေနဲ့ အစိုးရက ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ ပိုဆိုးတာ ရေကာတာ တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ U.S. Army Corps of Engineers က သူတို့ ဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့တဲ့ ချွတ်ယွင်းချက် ကြောင့် ရေကာတာ ကျိုးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လဲ ကြေငြာခဲ့ပါ။
ကျနော်တို့ မြန်မာတွေထင်သလို အာမခံကုမဏီတွေဟာ ရော်ကြေးငွေ လွယ်လွယ်ကူကူ ထုတ်ပေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ နှစ်နဲ့ချီပြီး တရားရုံးမှာ တက်ပြီးတောင်းရတာပါ။ အာမခံကုမဏီကလဲ သူတို့ ရော်ကြေးမပေးရအောင် ရှေ့နေတွေနဲ့ ကာကွယ်ပါတယ်။ တရားသူကြီးတွေက နှစ်ဖက်ပြောစကားကို ကြားနာပြီး ရော်ကြေးပေးသင့်လား၊ ဘယ်ပမာဏအထိပေးရမလဲ စတာတွေကို စီရင်ချက်ချပါတယ်။ Katrina ကိစ္စမှာတော့ ရေမြုပ်ပြီး ပျက်စီးသွားတဲ့ အိမ်တွေ တခုမှ ရော်ကြေးပေးဖို့ မလိုဘူးဆိုပြီး တရားသူကြီးက အမိန်ချပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ Insurance company အာမခံထားတာ သဘာဝ ဘေးနဲ့ ပျက်စီးချင်းတာပဲ ဖြစ်တယ်တဲ့။ လူကြောင့်မပါဘူးတဲ့။ အခုဟာ ရေကာတာ ဒီဇိုင်းဆွဲတာ မှားယွင်းလို့ ကျိုးပေါက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ဘာမှ ရော်စရာ မလိုဘူးတဲ့ဗျာ။ ကဲ ဘယ်လောက် အသည်းနာဖို့ကောင်းလဲ။ လစဉ်ပေးထားတဲ့ အာမခံကြေးတွေကို ကုမဏီကြီးတွေက အိပ်ထဲထည့်ပြီး တကယ်တမ်းကျတော့ မရော်ဘူး။
ဒီမှာ ကျနော်တို့မြန်မာတွေ သတိပြုထားသင့်တာလေးတွေ အမှတ်စဉ်နဲ့ တင်ပြချင်ပါတယ်
(၁) အာမခံကုမဏီတွေဟာ ကျနော်တို့ ထင်ထားသလို ရော်ကြေးကို လွယ်လွယ်နဲ့ ထုတ်မပေးပါဘူး
(၂) တရားရုံးဟာ အစိုးရထုတ်ပြန်တဲ့ ရေကာတာ လူ့ချွတ်ယွင်းချက်ကြောင့် ပေါက်တယ်လို့ ပြောတဲ့ အချက်ကို လုံးဝ မျက်စိပိတ် လက်ခံတဲ့သဘောရှိပါတယ်။
(၃)နောက်ဆုံးတော့ မိမိအိမ်တွေကို စိတ်ချလက်ချရှိဖို့ လစဉ်ကြေးပေးထားတဲ့ အာမခံငွေတွေဟာ အလဟဿဖြစ်သွားပြီး မိမိတို့ လည်း လမ်းပေါ်မှာ ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ၀မ်းနည်းစရာ အဖြစ်ဆိုးပါ
(၄) ဒီဘက်တွေမှာလည်း လည်သူစားစတမ်းတွေ လုပ်နေကျတယ်ဆိုတာ မြင်သာပါတယ်။
Posted by * In Search of Truth * at 1:47 AM0comments Links to this post
Labels: တရားဥပဒေ, ပြည်သူ့ဒုက္ခ
Posted by * In Search of Truth * at 3:38 AM 1 comments Links to this post
မနေ့တနေ့က လူတစ်ယောက် ဆိုင်းဘုတ်လေးကိုင်ပီး အမေရိကန် သံရုံးရှေ့မှာ ဆန္ဒပြတာ DVB မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံမှာ သွားတွေ့ပါတယ်။ ဆိုင်းဘုတ်မှာ ရေးထားတာ တရုပ် / ရုရှား မိဘ အလိုမရှိတဲ့။ သူ့လုပ်ပုံကိုကြည့်ပီး အကဲခတ်ရတာ အမေရိကန်ကိုတော့ အဖေတော်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောပဲ။ တကယ်တော့ ဒီမိုကရေစီအရေး လုပ်နေတဲ့ သူတွေရဲ့ လုပ်ရပ်ကို မြင်တိုင်း (ငါပြောသလိုလုပ် . . ငါလုပ်သလို မလုပ်နဲ့) ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်လေးကို အမြဲ သတိရပေးနေသလို ခံစားမိပါတယ်။ ဥပမာ ဒီမိုကရေစီသမားများမှ နအဖကို ပြည်သူလူထုကို လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်ပေးရမယ်လို့ အတင်းကို ဖိအားပေးနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကျတော့ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ကို လူမြင်မကောင်းအောင် ပိတ်ပင်နေကြပါတယ်။ မြန်မာ့အသံ သတင်းဘက်မလိုက်သင့်ဘူးလို့ ပြောနေပေမယ့် သူတို့ အားကိုးနေတဲ့ BBC, DVB သတင်းဌာနတွေကတော့ ဘက်လိုက်နေကျပါတယ်။ ငါပြောသလိုလုပ်၊ ငါလုပ်သလို မလုပ်နဲ့ ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်လေးဟာ ဒီမိုကရေစီလုပ်နေတဲ့ သူတွေအတွက် အထူးတီထွင် ပေးထားတယ်လို့တောင် ထင်လို့ရပါတယ်။ အခုလည်း တရုပ်၊ရုရှားကို နအဖ အဖေတော်တာ ဆန့်ကျင်တယ်တဲ့။ သြော် သူတို့ကျတော့ အမေရိကန်၊ အင်္ဂလန် တွေ့သမျှ အဖြူနိုင်ငံတွေကိုတော့ အဖေတော်ချင်ပုံ ပေါ်နေလားလို့ ။ အတွေးမှားရင်တော့ ခွင့်လွှတ်ကျပါဗျာ။ အမေရိကန်စစ်တပ် ကို ဘာမှန်းမသိပဲ DVB, BBC ပြောလို့ အထင်ကြီးနေသူများ အတွက် မှတ်တမ်းတင် ဗီဒီယိုလေးတွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အမှန်တရားကို ရဲဝင့်စွာ တွေးတော ဆင်ခြင်နိုင်ပါစေလို့လည်း ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
အမေရိကန် အစိုးရ CNN (အမေရိကန် မြန်မာ့အသံ) သတင်းတွေထဲမှာ ပြောသလို ဘာသာရေး အဆောက်အဦးတွေကို မထိခိုက်အောင် အမှန်တကယ် ကာကွယ်ရဲ့လားဆိုတာ ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပီး ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်
သတင်းတွေထဲမှာတော့ အမေရိကန်စစ်သားတွေ ကလေးတွေကို ချိုချဉ်နဲ့စားစရာတွေ လိုက်ဝေနေပါတာ မြင်ရမှာပါ။ ဒီမှာတော့ ရိုက်နှက်ပါတယ်။ ကြံ့ဖွတ်လဲ အမေရိကန်ကို အားကျတယ်ထင်ပါတယ်။ အမှန်ကို ရှာဖွေလိုသူများအတွက် လမ်းစ တစ်ခုပါ။
မြန်မာစစ်သားတွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် အမြဲသတင်းကို ပိုပြောတာတွေ၊ လိမ်ပြောတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီမှာတော့ အမေရိကန်ကြေးစားစစ်သားတွေ ကားမောင်းရင်း လမ်းဘေးမှာ ရှိတဲ့ သိုးအုပ်ကို လက်ဆော့ ပြစ်သွားတာပါ။
BBC, DVB သတင်းထဲမှာ မြန်မာစစ်သားတွေ ရွာဝင်မီးရှို့တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကို ကြားဖူးကြမှာပါ။ ဘာအကြောင်းကြောင့် မီးရှို့လဲ။ အဲဒီသတင်းတွေ တကယ်မှန်လားဆိုတာတော့ ကျနော်တို့ မသိပါဘူး။ ဒီမှာတော့ အမေရိကန် စစ်သားတွေ အီရတ်မှာ မရှိလို့ တက္ကစီ မောင်းစားနေသူရဲ့ ကားလေးကို တင့်ကားနဲ့ ပစိ ပနယ် တက်ကြိတ်ပီး ၀မ်းသာ ကြည်နူးနေတဲ့ ပုံပါ။
အမေရိကန်စစ်သားတွေ ကလေးငယ်လေးတွေကို တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ထိုးကြိတ်ခိုင်းတဲ့ ဗီဒီယိုပါ။ ကျနော်တို့ အညာမှာ ကြက်တိုက်သလိုမျိုးပေါ့။ ကလေးတွေကို တိရိစ္ဆာန်လို လုပ်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုပါ။
ှShoot first policy! လို့ပြောရမလားပဲ။ သတင်းထဲမှာတော့ သမကာင်္တဲ့ကားကို အရင်တားတယ် မရမှ ပြစ်တယ်ပေါ့ဗျာ။ ဒီမှာတော့ မသကာင်္တဲ့ကားကို အရင်ပြစ်တယ်။
အမေရိကန်စစ်သားတွေ ကလေးတွေကို နေပူထဲမှာ ရေဗူးလေးနဲ့ ဘယ်လို ကစားလဲ ကြည့်ပါ။
အမေရိကန် ကြေးစားစစ်သားတွေ အရပ်ဖက်ကားကို လက်သရမ်းပြစ်ခတ်နေတဲ့ပုံပါ။ သြော် ဒီမိုကရေစီ
ဒီမှာတော့ အမေရိကန် စစ်တပ် လမ်းပေါ်မှာ မြင်မြင်သမျှ ပြစ်ခတ်နေတဲ့ဗီဒီယိုပါ
အမေရိကန်ကို မျက်ကန်းအထင်ကြီးနေသူများအတွက် စဉ်းစားဖို့ တင်ပေးထားချင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by * In Search of Truth * at 2:16 AM3comments Links to this post
Labels: ပြည်သူ့ဒုက္ခ, လူအခွင့်အရေး, သတ်ဖြတ်ချင်း
9/11 နဲ့ 7/7 လူသတ်မှုကို ဒီမိုကရေစီစိတ်ဝင်စားသူတွေ မေ့ထားသင့်လား
အမှားအမှန် ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ယုံကြည်ရင် ကျနော်ရေးထားတာကို ဆုံးအောင် ဖတ်ပေးပါခင်ဗျာ။ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်ကတော့ စကားလုံးလှလှလေးများကို အသုံးပြုပြီး အယုံသွင်းတဲ့ အလုပ်ကို မနှစ်သက်ပါဘူး။ လိုရင်းတိုရှင်း ပြောပါမယ်။ အမှားအမှန် မိမိဦးနှောက်နဲ့ စဉ်းစား စေချင်ပါတယ်။ Closed mind လုပ်ပြီး ဆက်မဖတ်ချင်ဖူးဆိုရင်လဲ ကျနော် မတတ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။
မြင်သာအောင် ကျနော်ကားဝယ်တဲ့ ပုံစံလေး အသုံးပြုရှင်းပြ ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ပွဲစား စိတ်ဓါတ်လေးကို ပြောကြည့်ပါမယ်။ ပွဲစား တွေဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ ပျော့ကွက်ကို သိကျပါတယ်။ သူတို့ကား မ၀ယ် ၀ယ်အောင် ညွှန်းပြီး ပြောတတ်ကျပါတယ်။ လိုအပ်ရင် ဖြဲချောက်တာတွေ ရှိကြပါတယ်ခင်ဗျ။ ဖိအားပေး တာတွေလဲ လုပ်တတ်ကျပါတယ်ခင်ဗျ။ ဘာမှ မလေ့လာပဲ ကားပွဲစားနဲ့တွေ့လိုကတော့ သူတို့ရဲ့ ချောက်လုံး မြှောက်လုံးများကြားမှာ မြောသွားပြီး သူတို့ ကြိုးဆွဲရာကတဲ့ ရုပ်သေးရုပ်လေး ဖြစ်သွားမှာပါ။ ကားပွဲစားတွေကို ယုံကြည်လို့ မရဘူးပြောရင် လက်ခံမယ်ထင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ပထမဆုံး ကို့အသိတွေကို သူတို့ အသုံးပြုနေတဲ့ ကားတွေ ဘယ်လိုနေလဲ မေးမြန်းရပါတယ်။ သူတို့ အသုံးပြုပြီးရတဲ့ အတွေ့အကြုံကို ကြည့်ပြီး အဲဒီကား ၀ယ်သင့်လား ဆုံးဖြတ်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒီအထိ သဘောတူတယ် မဟုတ်လားခင်ဗျာ။
ကျနော်တို့နိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ရမှ ကြီးပွားမယ်လို့ မြှောက်လုံးပေးပြောနေတာပါ။ ဒီမိုကရေစီ မရရင် နိုင်ငံကြီး ဆက်လက် စုတ်ပြတ်နေမယ်လို့ ဖြဲချောက်နေတာ ဘယ်သူတွေလဲ။ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာ လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ် ဝေဖန်ခွင့်ပေါ်မှာ တည်ဆောက် ထားတယ်ပြောပြီး နည်းနည်းပါးပါး ဝေဖန်ရင် လူမြင်လို့ မကောင်းအောင် နည်းပေါင်းစုံနဲ့ တိုက်ခိုက်နေတာ ဘယ်သူတွေလဲ။ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံရေး သမားတွေ မဟုတ်လားခင်ဗျာ။ ကျနော်တို့တွေ နိုင်ငံရေးသမားတွေ အားလုံးကို ပွဲစားတွေနဲ့ တန်းတူထားရမှာပါ။ သူတို့ပြောသမျှ မယုံမိဖို့ လိုပါတယ်။ ကျနော်အခုလိုပြောတာကို ဒီမိုကရေစီ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အစ်ကိုတွေ စိတ်မရှိကျပါနဲ့ဗျာ။ ကျနော် စော်ကားလိုစိတ်နဲ့ ပြောနေတာ မဟုတ်ရပါဘူး။
အဲဒါတွေကြောင့် ဒီမိုကရေစီ စံနစ်ဟာ သူတို့ပြောသလို ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာ လက်ရှိ ဒီမိုကရေစီ စံနစ်ကျင့်သုံးနေတဲ့ အင်္ဂလန်၊ အမေရိကန်၊ ကနေဒါ နိုင်ငံတွေရဲ့ အခြေအနေမှန်ကို လေ့လာဖို့လိုပါတယ်။ ကားပွဲစား နိုင်ငံရေးသမားများ ရေးသားတဲ့ စာစောင်တွေ၊ အသံလွှင့်ဌာနတွေ ရဲ့ပြောကြားချက်နဲ့ အမှားအမှန် မပိုင်းခြားပါနဲ့။ အထူးသဖြင့် သူတို့တွေဟာ Emotional Manipulation လို့ခေါ်တဲ့ အပိုင်းမှာ အရမ်းကျွမ်းကျင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ စိတ်ကို သူတို့ ပြောသမျှယုံအောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ သတင်းတိကျတယ်လို့ သတ်မှတ်တဲ့ BBC ကို ကျနော်တို့ ဘက်မှာ မယုံကျပါဘူး။ မယုံဘူးဆိုရင် ဘယ်သတင်းကို နားထောင်လဲ မေးစရာရှိပါတယ်။ အဖြေကတော့ ဘယ်သတင်းမှ နားမထောင်ကျပါဘူး။ ကျတို့နှစ်ယောက် သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးနီးပါး သတင်းစာမှာ အားကစား၊ ရုပ်ရှင်၊ quiz နဲ့ classified ပဲ ဖတ်ကျပါတယ်။ မြန်မာပြည်သတင်းစာမှာ လူတွေက မင်္ဂလာဆောင်နဲ့ နာရေးဖတ်တဲ့သဘောမျိုးပါ။ အားလုံး အတူတူပါပဲ လေလို့ပဲ ဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
မြန်မာပြည် စစ်အဏာရှင်ကြောင့် မွဲနေတယ်လို့ လူတော်တော်များများ ယုံကြည်ကျပါတယ်။ ဒါတွေကို ကျနော်တို့ကို မွေးကတည်း နေ့စဉ်ကြားနေတော့ စိတ်ထဲမှာ အမှန်လို့စွဲထင်နေကျပါတယ်။ ဒါကို ကျနော်နဲ့ အစ်ကို မောင်ဆန်လုံးဝ သဘောမတူပါဘူး။ အဏာရှင်နိုင်ငံဖြစ်ပီး ချမ်းသာနေတဲ့ နိုင်ငံတွေ အများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒီမိုကရေစီစံနစ်နဲ့ မွဲတေနေတဲ့ နိုင်ငံလည်း မနည်းပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးဆိုးရွားနေတာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ နအဖကြား အဏာလုပွဲနဲ့ တိုင်းပြည်အတွင်း စည်းလုံးရေးလုံးဝ မရှိ ဖြစ်နေတာတွေကြောင့်ပါ။
နအဖ တခုတည်းကိုသာ အပြစ်ဖို့နေတာဟာ ကားပွဲစားများ၏ လုပ်ထုံးအစဉ်အလာနဲ့ လုံးဝ ချွတ်စွပ်တူနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
စဉ်းစားဖို့ပါလေစာရင်း (အမှန်ကို သိလိုသူများအတွက်သာ)
(၁)ပထမဆုံး ဒီမိုကရေစီရမှ တိုးတက်ဆိုတဲ့ မက်လုံးကို ကျနော်တို့ ဖြစ်နိုင်လား စဉ်းစားပါ။ တရုပ်နိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ မရှိပါဘူး။ တိုးတက်ပါတယ်။ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ စီးပွားရေး အကြပ်အတည်းကို နအဖကြီးမှာပဲ အားလုံးတာဝန်ရှိတယ်လို့ ပြောချင်းဟာ ကလေးငယ်လေးတွေကို ပုံပြင်ပြောသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ နိုင်ငံပေါင်း ၂၀၀ လောက်ရှိပါတယ်။ စီးပွားရေး သပိတ်မှောက်ထားတဲ့ထဲက စီးပွားရေး အဆင်ပြေတာ ကြားဖူးကျပါလား။ ဒါဆိုစီးပွားရေး ပိတ်ဆို့အောင် လှုပ်ရှားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ အပြစ်မတင်ပဲ ထားသင့်လား။ စိတ်မရှိဘူးဆိုရင် မေးချင်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ သမားတွေ နအဖ လက်အောက်မှာ မြန်မာလူမျိုးတွေ စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေတာ မြင်ချင်ရဲ့လား ။ ကျနော် တွေးမိတောသလောက် စီးပွားရေးအဆင်ပြေပီး ပြည်သူတွေဟာ ဒီမိုကရေစီသမားတွေ အဏာရရှိရေး မကူညီမှာကိုတော့ စိုးရိမ်နေတဲ့ပုံ ရှိပါတယ်။(သက်ဆိုင်သူများ စိတ်မဆိုးကျပါနဲ့ဗျာ)
(၂) အင်ဒိုနီးရှား ဆူဟာတို အာဏာရှင် လက်အောက်မှာ တိုးတက်ပါတယ်။ ယခု ဒီမိုကရေစီ စံနစ်အောက်မှာ စီးပွားရေး ချွတ်ခြုံကျနေပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ စံနစ် ရှိမှ တိုးတက်မယ်ဆိုတာ လက်တွေ့ဆန်ပါသလား
(၃) ဒီမိုကရေစီ စံနစ်မှာ မိမိပြည်သူတွေရဲ့ အသက်ကို တန်ဖိုးထားရင် အမေရိကန်၊ အင်္ဂလန် နိုင်ငံတွေမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ 9/11 နဲ့ 7/7 လူသတ်မှုကို ဘာကြောင့် တရားခံ အစစ်ကို မဖေါ်ထုတ်ပဲ နေနိုင်လဲ
(၄) လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်ရှိရင် 9/11 နဲ့ 7/7 ကောင်မရှင်စုံစမ်းတဲ့ ကိတ်စ္စမှာ ပြည်သူရွေးချယ်ထားတဲ့ လွတ်တော် အမတ်တွေ ဘာကြောင့် ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေပါလဲ။
(၅) ဘာကြောင့် အသံလွှင့်နဲ့ စာနယ်ဇင်းတွေ 9/11, 7/7 ကို အကျယ်ချဲ့ မပြောပဲနေကျလဲ။ သက်ဆိုင်တဲ့ အုပ်ချုပ်သူတွေကို မေးခွန်းမထုတ်ကျလဲ။
(၆) ဒီမိုကရေစီ (အမေရိကန်နဲ့ ကနေဒါ) အစိုးရဟာ ပြည်သူတွေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တယ်ဆိုရင် ဘာကြောင့် ပြည်သူတွေက ဓါတုအဆိပ်ငွေ့တွေ သူတို့မြို့တွေပေါ်မှာ ပက်ဖျန်းတဲ့ စွပ်စွဲချက်ကို ယုံကြည်နေလဲ
(၇) လူသန်း ၂၀ ကျော် သေဆုံးမှု့နောက်ကွယ်မှာ အမေရိကန်အစိုးရ ပတ်သက်နေတယ်လို့ အမေရိကန်တွေ ယုံကြည်နေတာကို ဘယ်လို စဉ်းစားမလဲ။ ကိုယ့်ပြည်သူက တောင် အဲလိုထင်သွားရခြင်းရဲ့ အခြေခံက ဘာကြောင့်လဲ
(၈) ဒီမိုကရေစီစံနစ်မှာ တက်လာတဲ့ အစိုးရဟာ ပြည်သူတွေ လိုလားတာ လုပ်ပေးတယ်ဆိုရင် လူငယ်တွေ ဘာကြောင့် မဲပေးဖို့ စိတ်မ၀င်စားလဲ။
(၉) တရားဥပဒေ အမှန်အကန်ရှိရင် အမေရိကန်နဲ့ ကနေဒါ ကလူတွေဟာ FBI ၊ RCMP ၊ CIA တွေကို ဘာကြောင့် ကြောက်နေလဲ
(၁၀) သတင်းစာတွေက အစိုးရလုပ်ရပ်တွေ ထောက်ပြနိုင်စွမ်းရှိရင် ဘာကြောင့် ရဲတွေဟာ ပြည်သူတွေကို လက်လွတ်စပယ် လူမြင်ကွင်းမှာလုပ်ရဲလဲ
ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။ အေးအေးဆေးဆေး စဉ်းစားကြပါဗျာ။ အတူတူပါပဲလေ နဲ့ပဲ ပြီးသွားမယ်ထင်ပါတယ်။ အမှန်ကို တွေ့ရှိပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
Posted by * In Search of Truth * at 8:34 PM 18 comments Links to this post
Labels: ပြည်သူ့ဒုက္ခ, လိမ်ညာချင်း, လူသတ်, လူအခွင့်အရေး, သတင်းဌာန
Posted by * In Search of Truth * at 3:38 PM0comments Links to this post
ဒီမိုကရေစီ ၀န်ကြီးချုပ် Tony blair လန်ဒန်ဗုံန်းပေါက်ကွဲမှု စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ မလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့
7/7 လူသတ်မှုကြီးသည် 9/11 လူသတ်မှုကြီး ကဲ့သို့ ဒီမိုကရေစီအစိုးရ လူသတ်မှုကြီးဖြစ်သည်။ လူတွေဟာ လန်ဒန်ဗုံန်းပေါက်ကွဲမှုမှာ သူတို့ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ အစိုးရကိုယ်တိုင် လုပ်တယ်လို့ ယုံကြည်နေကျပါတယ်။ အဲလိုယုံကြည်နိုင်တဲ့ အချက်တွေ အများကြီးလဲ ရှိနေပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံခေါင်းဆောင် Tony Blair ဟာ Bush ရဲ့ မှားယွင်းလုပ်ကိုင်ပုံကို သင်ခန်းစာယူလိုက်ပုံလည်း ရပါတယ်။ ပြည်သူလူထု တောင်းဆိုတဲ့ စုံစမ်းရေးအဖွဲကို မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးတဲ့။ 9/11 လို ရုပ်ပြ စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ နဲ့ ပြည်သူတွေကို အလုပ်ရှုပ်ခံပြီး ချွေးသိပ်ပေးချင်ပုံမပေါ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Tony Blair ဒီမိုကရေစီစံနစ်နဲ့ အညီ အာဏာရှင်မြန်မာနိုင်ငံလို လုပ်မပေးနိုင်ဘူးလို့ ဒဲ့ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အကြောင်းပြချက်လေးတော့ ပေးထားပါတယ်။ အဲလိုလုပ်ချင်းဟာ သူတို့ MI တွေကို သိက္ခာထိခိုက်စေနိုင်ပြီး အကြမ်းဖျက်သမားတွေကို တိုက်ခိုက်တဲ့ အဓိက လမ်းကြောင်းကနေ သွေဖီသွားမှာ စိုးရိမ်လို့တဲ့။ တော်လိုက်တဲ့ ၀န်ကြီးချုပ် ပါလား
Posted by * In Search of Truth * at 3:23 PM5comments Links to this post
Labels: လိမ်ညာချင်း, လူသတ်, လူအခွင့်အရေး
Archieve.org မှ BBC နာရီဝက်ကြိုတင် သတင်းထုတ်လွှင့်ကြောင်း အတည်ပြု
အင်တာနက်မှတ်တမ်း ဗီဒီယို၊ ဓါတ်ပုံများ သိမ်းဆည်းထားသည့် Archieve.org မှ ညွှန်ကြားရေးမှုး Stewart Cheifet မှ BBC သတင်းဌာန နာရီဝက်တင်ကြိုပြီး Bunker အဖြစ်ခိုင်မာစွာ တည်ဆောက်ထားသည့် တိုက်ကြီး ပြိုကျမှု ထုတ်လွှင့်ကြောင်း ထောက်ခံပေး လိုက်ပါသည်။ ထူးဆန်းသည်မှ BBC, CNN , FOX News တို့မှ အခုလို ထောက်ခံစာထွက်လာချင်းကို သတင်းအဖြစ် မကြေငြာခဲ့ပါ။ နည်းနည်းတော့ ထူးဆန်းနေပါသည်။
Posted by * In Search of Truth * at 2:52 PM 1 comments Links to this post
Labels: လိမ်ညာချင်း, သတင်းဌာန
ဒီတခါလည်း “အားလုံး အတူတူပါပဲကွယ်” ဆိုတာနဲ့ စချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ငွေစက္ကူအသစ်တွေ ထွက်လာတိုင်း ပြောစရာ အမှတ်အသား တခုခု ပါတတ်စမြဲပါ။ ဒီတော့ ကျနော်တို့ ဆီမှာ စစ်ခေါင်းဆောင်ကြီးများကို စိတ်မမှန်ဘူးလို့ ကောက်ချက်ချတဲ့ လူတွေကလည်း မနည်းပါဘူး။ အဲလို ကောက်ချက်ချ စတမ်းဆိုရင် အမေရိကန် အစိုးရလဲ ထည့်တွက်ရမှာ ဖြစ်နေပါပြီ။ အကြောင်းကတော့ $20 နဲ့ $5 ငွေစက္ကူထဲမှာ TwinTower ကြီး မီးလောင်နေတဲ့ လှို့ဝှက်အမှတ်အသား ထည့်သွင်းထားလို့ပါ။ အမေရိကန် ငွေကြေးနဲ့ နိုင်ငံတော် တံဆိပ်အားလုံးနည်းပါးမှာ မသင်္ကာစရာ အမှတ်အသားတွေ ထည့်ထားတာတွေ ရှိပါတယ်။ နောင်ကြုံမှ တင်ပြပါအုံးမယ်ခင်ဗျာ။ Youtube နဲ့ ဓါတ်ပုံ လေးများကြည့်ကြပါအုံး။ ဒီအပတ် ကျနော် Blog ရေးတာကို နားပြီး စာမေးပွဲအတွက် စာကျက်ပါတော့မယ်။ နောက်အပတ်မှာ ထပ်ပြီး ရေးပါမယ် ခင်ဗျာ။
Twin Towers Illusion On Money - Funny video clips areaclick away
Posted by * In Search of Truth * at 12:36 PM3comments Links to this post
Posted by * In Search of Truth * at 8:12 PM5comments Links to this post
လူတကာကို လိုက်လံ အင်တာဗျူးလုပ်နေရတဲ့ BBC သတင်းထောက် Jane Standley တစ်ယောက်အကြောင်းပါ။ သူ့ကို 9/11 ကိစ္စ အင်တာဗျူးလုပ်တဲ့ အချိန်မှာတော့ဗျာ . . . .
Posted by * In Search of Truth * at 12:36 PM0comments Links to this post
Labels: လိမ်ညာချင်း, သတင်းဌာန, သတင်းမှား
BBC နဲ့ NASA အရေးကြီးဆုံး တိတ်ခွေများ ပျောက်သွားချင်း
အမှန်တရားပေါ်လာရေးအတွက် အချက်အလက် ဆိုတာ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ လူတိုင်း သိထားကျပါတယ်။ ဒီထဲမှာ မှတ်တမ်းတင် ဗီဒီယိုတွေလဲ ပါပါတယ်။ အမှန်တရားဟာ မိမိရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ဆန့်ကျင်လာနိုင်တယ်လို့ ယူဆလာတဲ့ အချိန်မှာတော့ အဲဒါတွေကို ဖျောက်ဖျက်ပြစ်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို လုပ်တတ်ကျပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဦးစောမောင် နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရဲ့ သမိုင်းကို နအဖ ဖျောက်ဖျက်ပြစ်ခဲ့တာ လူတိုင်းသတိထားမိကျမှာပါ။ ဒီလုပ်ရပ်ကို မြန်မာပြည်မှာတင်တွေ့ရတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ လုပ်တယ်ဆိုတာ သတိထားမိအောင် တင်ပြချင်ပါတယ်။
ပထမဆုံး အမေရိကန်နိုင်ငံ အာကာသဌန ကြီးဖြစ်တဲ့ NASA ရဲ့လုပ်ရပ်ကို တင်ပြချင်ပါတယ်။ အမေရိကန် အမှန်တကယ် လပေါ်ခြေချခဲ့လားဆိုတာ သံသယတွေ အများကြီး ရှိနေပါတယ်။ အာကာသယဉ်မှုးများပင် လကမ္ဘာရဲ့ ကောင်းကင်မှာ ကြယ်တွေ မြင်ခဲ့လားဆိုတဲ့ လွယ်ကူတဲ့ မေးခွန်းလေးကိုပင် မဖြေနိုင်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ် မျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။ သိတဲ့အတိုင်း ရုပ်ရှင်ဟာ အမြဲမှုံန်ဝါးပြီး မကြည်လင်ဖြစ်နေပါတယ်။ တကယ်လို့ မူရင်းသာ ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုရင် ပိုမိုပြတ်သားပြီး လိမ်ညာတယ်လို့ ထင်ထားတာတွေလဲ အဖြေပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မနှစ် ၂၀၀၆ ခုနှစ် သြဂုတ်လမှာတော့ နာဆာက သူတို့ရဲ့ မူရင်းတိပ်ဟာ ပျောက်ဆုံးသွားတယ်တဲ့။ ဒီတိပ်ခွေဟာ အမေရိကန်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို မြှင့်တင်နိုင်ပြီး ၊ ပျောက်ဆုံးခဲ့ရင် အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ကျသွားနိုင်မှန်း သိနိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်အခုလိုဖြစ်သွားလဲဆိုတာတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲ စဉ်းစားကြည့်ကြပါဗျာ။
ဆက်လက်တင်ပြချင်တာကတော့ BBC ပါ။ BBC ဟာ Tower7ကို နာရီဝက်စောပြီး ပြိုကျသွားပီလို့ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ လူတွေကလည်း သူတို့ သတင်းဌာနကို ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ မေးမြန်းတာတွေ လုပ်ခဲ့ကျပါတယ်။ ဘာကြောင့် တိုက်ကြီး ပြိုကျမှာကို ကြိုသိနေလဲ ? CIA က ရေးပေးတဲ့ သတင်းကိုပဲ ဖတ်ပြနေရလို့လား ? တိုက်ပြိုကျခါနီးမှာ ဘာကြောင့် တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့်နေတာကို ချက်ချင်း ရပ်ဆိုင်းလဲ ? စသဖြင့် အမျိုးမျိုး မေးခွန်းထုတ်ကျပါတယ်။ BBCဟာ သူများတွေကိုသာ မေးခွန်းတွေလိုက်ထုတ်နေပြီး ကိုယ်တိုင်ကျတော့ ဘယ်မေးခွန်းကို မဖြေကြားခဲ့ပါဘူး။ နောက်ဆုံး မသက်သာတော့ BBC editor , Richard Porter ဟာ 9/11 ဖြစ်ပြီး ခြောက်နှစ်အကြာမှာ (Feb 27 2007) မှာ သူရဲ့ editor Blog မှာ ဖြေရှင်းချက် ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ (မှတ်ချက် ။ BBC ဌာန၏ တရားဝင် ဖြေရှင်းချက် မဟုတ်ပါ။ ဖြေရှင်းတဲ့ အချိန်ဟာလည်း ခြောက်နှစ်ကြာမှ ဖြစ်သည်) သူတို့ စွပ်စွဲချက်မှန်မမှန် ပြန်ကြည့်ဖို့ မူရင်း သတင်းတိပ်ခွေမရှိတော့ကြောင်း၊ သူတို့ဟာ လူသတ်မှုမှာ ဘယ်အခန်းမှ မပါဝင်ကြောင်း စတာတွေကိုသာ ပြောကြားသွားပါတယ်။ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေး ရေးလုပ်မယ်လို့တော့ ပြောမထားပါဘူး။ ဒီနေရာမှာ ကျနော်တို့ စဉ်းစားသင့်တာလေးတွေရှိနေပါပြီ။
(၁) BBC, CNN , ABC, CNBC စတဲ့ သတင်းဌာကြီးတွေမှာ BBC တိုက်ပြိုကျမယ့် သတင်း နာရီဝက်ကြိုပြောခဲ့ တဲ့ ကိစ္စ ဘာကြောင့်မကြေငြာခဲ့လဲ။
(၂) BBC ဟာ ဘာကြောင့် သတင်းကြေငြာပေးတဲ့ သတင်းထောက် ကိုခေါ်ယူမေးမြန်းတာတွေ မလုပ်လဲ
(၃) BBC မှာ နှစ်ပေါင်း ၈၀ က အရေးမကြီးတဲ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေကိုတောင် သိမ်းဆည်းထားနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းရှိပါတယ်။ ဒါဆိုရင် မနေ့ တနေ့က ဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာသမိုင်းမှာ အကြီးမားဆုံး လူသတ်ပွဲကြီးလို အရေးကြီး မှတ်တမ်းတင်ခွေ ဘာကြောင့် ပြောက်ဆုံးသွားရသလဲ
(၄) CIA သတင်းတွေကို ဖတ်ပေးနေရတယ်လို့ စွပ်စွဲချက် နဲ့ BBC ဟာ လွတ်လပ်မှုမရှိဘူးဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေဟာ BBC ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို အရမ်းထိခိုက်စေပါတယ်။ နောင်မှာ ယုံကြည်တဲ့ သူတွေ အရမ်းကို နည်းသွားစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဒီပြဿနာကို အရေးယူ မဖြေရှင်းပဲ ခြောက်နှစ်ကြာမှ အယ်ဒီတာက ပီးစလွယ်ဖြေရှင်းလဲ
(၅) ဒီတခုကတော့ ရယ်စရာပုံပြင်လေးလို ဖြစ်နေပါတယ်။ အယ်ဒီတာက သူ့ Blog ဖတ်တဲ့သူတွေကို အဲဒီသတင်းကားရှိရင် သူ့ဆီပို့ပေးဖို့ အကူအညီတောင်းခံထားပါတယ်။ အမှုမှန်ပေါ်ရေးအတွက်တဲ့။ အစ်ကို မောင်ဆန်တောင် Youtube မှာရှာတွေ့သေးတယ်ဆိုရင် အယ်ဒီတာကြီးရဲ့ သတင်းထောက်ထောက်တွေ Youtube မသုံးတတ်လို့ ကျနော်တို့ကို အကူအညီ ပြန်တောင်းထားတာလားလို့ ပြန်မေးခွန်းထုတ်ရမလို ဖြစ်နေပါတယ်။
(၆) အယ်ဒီတာ ရေးထားတာကို သုံးသပ်ချက်မှာ ယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့ အထောက်အထား တခုမှ မပါပဲ။ သူတို့ မှားခဲ့ရင် ရိုးသားစွာမှားတာပဲ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ အဆုံးသတ်ထားပါတယ်။
(၇) နောက်ဆုံးတော့ “အတူတူပါပဲလေ” လို့ ပြောရမလားပဲ
BBC Editor’s Blog
BBC သတင်းနဲ့ သတင်းထောက် အရည်အချင်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်သင့်ပြီလား
Posted by * In Search of Truth * at 12:14 PM 16 comments Links to this post
Labels: လိမ်ညာချင်း, သတင်းဌာန, အထွေထွေ
ကျနော်တို့ မွေးတုံးက သိထားတာကတော့ BBC သတင်းဌာန ဟာ ဂုဏ်ရှိသော သတင်းဌာန တခုဖြစ်တယ်။ လွတ်လပ်စွာ သတင်း အမှန်ကို ထုတ်ဖေါ်တတ်တယ်။ မြန်မာပြည် အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာ အစိုးရများ၏ မသမာမှုများကိုဖြစ်စေ၊ ရက်စက်မှုများကို ဖြစ်စေ ဘက်မလိုက်ပဲ ထုတ်ဖေါ်တတ်တယ် ဆိုသည့် ယုံကြည်ချက်များလဲ မြန်မာလူထုအတွင်းမှာ ရှိပါတယ်။ ဒီလိုပဲ BBC သတင်းထောက်တွေဟာ အရည်အချင်းရှိတယ် လို့လဲ သတ်မှတ်ကျပါတယ်။ BBC သတင်းထောက်များရဲ့ မြန်မာ့အရေး သုံးသပ်ချက်တွေကို အထင်တကြီး နားထောင်တဲ့ မြန်မာလူထု ဆိုတာလည်း မနည်းလှပါဘူး။ နိုင်ငံရေး သမားတွေသာ မကပဲ နအဖ စစ်အရာရှိတွေလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် 2001 ခုနှစ်မှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ BBC အဖြစ်ကို ကြည့်ပြီး ကျနော်တို့ တတွေ ရဲ့ အမြင်ကို ပြန်လည် သုံးသပ်ရမယ့် အခြေအနေ ရောက်နေပြီ ထင်ပါတယ်။
9/11 မှာ ကျနော်တို့ Twin Tower တိုက်ကြီး နှစ်လုံး ပြိုကျသွားတာကိုပဲ သတိထားမိကျ ပါတယ်။ building #7 လို့ ခေါ်တဲ့ 47 ထပ်ရှိတဲ့ တိုက်ပြိုကျသွားတာက ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားစရာတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒီတိုက်ဟာ သမရိုးကျ တိုက်မဟုတ်ပါဘူး။ စစ်ဖြစ်ခဲ့ရင် မြို့တော်ဝန် ပုံးအောင်းနိုင်အောင် လုပ်ထားတဲ့ တိုက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ခိုင်ခိုင်မာမာ ဆောက်ထားတဲ့ တိုက်တစ်လုံးပါ။ ဒီတိုက်ကြီးဟာ CIA လို အရေးကြီး အဖွဲ့ အစည်းတွေ ရဲ့ အခြေစိုက်ရာနေရာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ပြိုကျသွားတယ်ပဲ ဆိုပါတော့။
အခုလို ခိုင်ခိုင်မာမာ ဆောက်ထားတဲ့ တိုက်ကြီး မပြိုကျမီ BBCဟာ နာရီဝက်ကြိုပြီး ဒီတိုက်ကြီးပြိုကျသွားကြောင်း သတင်းထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါတယ်။ ရယ်စရာဖြစ်နေတာကတော့ သတင်းထောက် Jane Standley နောက်ဖက်ကို လှည့်ပြီး အဲဒီတိုက်မရှိတော့ဘူးလို့ ပြောချိန်မှာတော့ သူဟာ Tower #7 ကို မျက်နှာမှု ရက်ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒီလို ဘာကြောင့် BBC ဖြစ်ရလဲဆိုတာ သုံးသပ်ချက် အမျိုးမျိုးလုပ်ကျပါတယ်။ အများစုကတော့ CIA ကနေ ရေးထားတဲ့ သတင်းတွေကို BBC နဲ့ CNN ဖတ်ပေးရတယ်လို့ ယူဆကျပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သတင်းထောက်ဟာ သူ့ကို CIA က ကြိုပို့ထားတဲ့ သတင်းကို အချိန်စော ဖတ်မိလို့ အခုလို ဖြစ်သွားတယ်လို့ တွက်ချက်ကျပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်စုံစမ်းလို့ သိရတယ်ဆိုရင် တိုက်ပြိုပြီးမှသာ သတင်းက ထွက်မှာပါ။ ဒါဟာ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာလည်း သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် မရှိဘူးဆိုတာကို ဖေါ်ပြနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် BBC သတင်းတွေဟာ CIA အာဘော်တွေ မဖြစ်ဖူးလို့ ငြင်းဖို့ ခက်သွားပါတယ်။ Jane Standley ရဲ့ အရည်အချင်းကိုလဲ စဉ်းစားစရာ ဖြစ်နေပါတယ်။ Tower #7 ကိုတောင် ဘယ်တိုက်မှန်းမသိဘူးဆိုတဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိပါတယ်။ ကို့ဖာသာကို စဉ်းစားဖို့ Youtube ကြည့်လိုက်ပါအုံးဗျာ
ကျနော် နောက်မှ BBC ဖြေရှင်းချက်နဲ့ သတင်းထောက်နဲ့ တွေ့စုံမေးမြန်းခန်းကို တင်ပြပါမယ်။
ဒါကတော့ BBC က ကြေငြာချက်ပါ ။ သတင်းထောက်နဲ့ သတင်းကြေငြာသူနှစ်ယောက် သရုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ RAMBO ထက်အများကြီးသာပါတယ်။
ဒီဟာကတော့ FOX သတင်းဗီဒီယိုပါ။ သူကတော့ ပိုရယ်ပါတယ်။ Tower7ပြိုကျသွားပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာမှ တိုက်ကြီးကပြိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ သတင်းကြေငြာသူတွေနှစ်ယောက်ရဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက် ဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတာ မျက်နှာတွေကို ကြည့်ပါခင်ဗျာ။
Posted by * In Search of Truth * at 7:50 PM2comments Links to this post
Labels: လိမ်ညာချင်း, သတင်းဌာန, သတင်းမှား, သရုပ်ဆောင်, အထွေထွေ